Inona no fitaratra? - fitaratra HHG
Ramatoa fitaratra roa no napetaka tamin'ny tariby metaly manjelanjelatra nefa henjana, ary avy eo dia namboarina ho faritany matevina sy laka matevina ny horonan-tsarimihetsika roa misy amin'ny vy vita amin'ny plastika mangarahara ultraviolet. Ny horonan-tsarimihetsika anatiny sy ny tariby metaly manamboatra azy dia manana vokatra fanoherana ny halatra sy ny fipoahana.
Ny ambaratonga fanamafisana ny fiarovana fitaratra ny haavon'ny fitaratra azo antoka dia ny hafanana ny fitaratra mahazatra mahazatra akaikin'ny teboka mafy. Na izany aza, rehefa mihena tsimoramora ny fisehoana fitaratra, dia mihena amin'ny fihenan'ny fitaratra ilay fihenan-tsasatra, ary ny adin-tsaina miforitra ao anaty lay. Raha sorena noho ny fihenan-tsakafo mahery vaika ny adin-tsaina matevina vokatry ny tsindry mavesatra dia ampiasaina ny tanjaka sy ny fiarovana amin'ny fitomboana ny fitaratra.
Ny hamafin'ny fampiasana ny endri-javatra dia nohamafisina, ka tsy misy loaka misandratra. Ny tanjaky ny TongMark dia manodidina ny 3 ~ 5 eo ho eo amin'ny fitaratra matevina mahazatra.
Tsy mihoatra ny mahazatra ny fitaratra noho ny fiovan'ny mari-pana. (makà fitaratra 5mm nohamafisina, ohatra, mahatanty ny fiovan'ny hafanana amin'ny 200 ℃)
Rehefa simba amin'ny hery antonony ny fitaratra dia mandanjalanja ny adin-tsaina. Ny vera manontolo dia tapaka amin'ny singa bitika be dia be, izay mety hateraky ny vatan'olombelona.
Mampiasà fiara, lamasinina, sambo. Fananganana, fanaka, varavarana lehibe, escalator, afomanga, sns.
Ny vera fiarovana amin'ny adhesive dia vita eo anelanelan'ny roa na maromaro ny fitaratra ho an'ny plastika mafy sy mafana PVB roa-endriny. Voalohany, ny rivotra iavanan'ny takelaka roa fandroana dia esorina tsara araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny fanerena na fanaovana bizina. avy eo, napetraka ao anaty lafaoro lehibe izy io mba hampiasana ny tsindry sy ny hafanana ambony mba hanaovana hipetraka hatraiza hatraiza ny horonantsary résin ary hisaraka.